” အဖေ့အကောင့်လေး အရင်လို မီး မစိမ်းတော့ ပါ “ အကြောင်းရင်းကတော့… – Zartiman
” အဖေ့အကောင့်လေး အရင်လို မီး မစိမ်းတော့ ပါ “ အကြောင်းရင်းကတော့…
အခုကျွန်တော် အဖေ့ အကောင့်ကို လက်ခံလိုက်ပြီလေ အဖေ။ကျွန်တော် ဘလော့ မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ အဖေ့ကို ဂတိတွေပေးရင်း ငိုနေမိလည်း….အဖေ့အကောင့်လေးကတော့ မီးမစိမ်းတော့ပါ…..( ဇူလိုင် ၃၁ ၂၀၁၆ ကြေးမုံ သတင်းစာပါ အောင်ဘုန်း ရူပဗေဒ ဒဂုံ တက္ကသိုလ်၏ စာကို ကူးယူ ဖော်ပြပါသည် )အဖေ Facebook ဆိုတာကို စသုံးတော့ ကျွန်တော့်အကောင့်ကို စပြီး add တာ။ အဖေ့ နာမည်နဲ့ အဖေ့အကောင့်ကိုမြင်တော့ လန့်သွားတယ်။ငါ့အဖေပါလား…..
… အံမယ် အဖေက အင်တာနက်တောင်သုံးတတ်လို့၊ ……အဖေက ကျွန်တော့ အကောင့်ကို add ပြီး ကျွန်တော့ ညီမလေး အကောင့်ကို လည်း ရှာပြီး add တယ်။သူကမောင်နှမ နှစ်ယောက်စလုံး ဘာတွေတင်ထားလဲ ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေပြောလဲ သိချင်ရုံသာ။ ကျွန်တော်က တော့ အ ဖေ့အကောင့်ကိုလက်ခံပြီးမှ စဉ်းစားတယ်၊…….ငါပေါက်ကရတွေလျောက်တင်လို့ အဖေမြင်ရင် အဆူခံရမလားဆိုပြီး။…. သူ ကကျွန်တော် အချစ်အကြောင်းတွေ လျောက်ရေးရင်လဲ ဖတ်တာပဲ။
ပြီးရင် အမေ့ကိုပြန်တိုင်သလိုလိုနဲ့ မင်းသားတော်မောင်က ဘာတွေရေးနေတာလဲဆိုပြီး မိဘအကြောင်းကျ မရေးဘူးဆိုပြီး ဆူသလိုလိုနဲ့ ပြန်ပြောတယ်။ကြာတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး ငါ့အကောင့်ထဲ အဖေရှိနေရင် ငါလုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သူမသိအောင် ဘလော့လိုက်တယ်။ကျွန်တော့အကောင့်ကို ရှာမတွေ့တော့ လာမေးတယ်။…… မင်းအကောင့်ရှာမတွေ့တော့ဘူး ဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့။ ကျွန်တော်လဲလိမ်လိုက်တယ်….. သိဘူးလေ ပျက်သွားတာနေမှာပေါ့လို့……။
အသက်ကြီးတဲ့အဖေက မသိရှာဘူး ..သြော် ဟုတ်လားဆိုပြီး သူ့အကောင့်ထဲကသတင်းတွေပဲ ဖြတ်ပီး ပျော်နေရှာတယ်။မကြာခင် သူ့ သားတော်မောင်ကသူ့ကို ဘလော့ထားတယ်ဆိုတာ အိမ်ကညီမပြောတော့မှ အကောင့်သစ်ကလေးဖွင့်ပြီး add လို့မရတဲ့ သား အကောင့် ကို တိတ်တိတ်လေး follow လုပ်ထားရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လို့ နိုင်ငံခြားရောက်နေချိန် အဖေ့မှာ ကင်ဆာဖြစ်လာတယ်။အဆက်အသွယ်မရပဲ သားတော်မောင် အဝေးရောက်နေချိန်။
အဖေကတော့ add လို့မရတဲ့ သားအကောင့်က ပုံတွေကို ဆေးရုံမှာကြည့်ရင်း အလွမ်းဖြေနေရရှာတယ်။ပါးစပ်ကလဲ တဖွဖွ ငါ့သားလေး စိတ်ပူနေမယ် ငါ့ရောဂါအကြောင်း မပြောပါနဲ့တဲ့။သားတော်မောင်က ပင်လယ်ထဲမှာ သင်္ဘောသားဘဝ ဆိုတော့ ……ကမ်းကပ်တဲ့အချိန် အင်တာနက်သုံးလို့ရတော့ အိမ်ကလူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်မှ သိရတယ်။အဖေဆုံးပြီတဲ့။မသေခင် ကျွန်တော့ အကောင့်မှာ တင်ထား တဲ့ စာလေးတွေ ပုံလေးတွေကို ဖတ်ရင်း ပြုံးနေရှာတာတဲ့။အဖေ့ အကောင့် လေး မီးစိမ်းနေပါစေ။
Credit : Thaw Zay Phyo
Martin Swe 31-07-2016
အခုကြှနျတျော အဖေ့ အကောငျ့ကို လကျခံလိုကျပွီလေ အဖေ။ကြှနျတျော ဘလော့ မလုပျတော့ပါဘူးလို့ အဖကေို့ ဂတိတှပေေးရငျး ငိုနမေိလညျး….အဖအေ့ကောငျ့လေးကတော့ မီးမစိမျးတော့ပါ…..( ဇူလိုငျ ၃၁ ၂၀၁၆ ကွေးမုံ သတငျးစာပါ အောငျဘုနျး ရူပဗဒေ ဒဂုံ တက်ကသိုလျ၏ စာကို ကူးယူ ဖျောပွပါသညျ )အဖေ Facebook ဆိုတာကို စသုံးတော့ ကြှနျတေျာ့အကောငျ့ကို စပွီး add တာ။ အဖေ့ နာမညျနဲ့ အဖအေ့ကောငျ့ကိုမွငျတော့ လနျ့သှားတယျ။ငါ့အဖပေါလား…..
… အံမယျ အဖကေ အငျတာနကျတောငျသုံးတတျလို့၊ ……အဖကေ ကြှနျတော့ အကောငျ့ကို add ပွီး ကြှနျတော့ ညီမလေး အကောငျ့ကို လညျး ရှာပွီး add တယျ။သူကမောငျနှမ နှဈယောကျစလုံး ဘာတှတေငျထားလဲ ဘယျသူနဲ့ ဘာတှပွေောလဲ သိခငျြရုံသာ။ ကြှနျတျောက တော့ အ ဖအေ့ကောငျ့ကိုလကျခံပွီးမှ စဉျးစားတယျ၊…….ငါပေါကျကရတှလြေောကျတငျလို့ အဖမွေငျရငျ အဆူခံရမလားဆိုပွီး။…. သူ ကကြှနျတျော အခဈြအကွောငျးတှေ လြောကျရေးရငျလဲ ဖတျတာပဲ။
ပွီးရငျ အမကေို့ပွနျတိုငျသလိုလိုနဲ့ မငျးသားတျောမောငျက ဘာတှရေေးနတောလဲဆိုပွီး မိဘအကွောငျးကြ မရေးဘူးဆိုပွီး ဆူသလိုလိုနဲ့ ပွနျပွောတယျ။ကွာတော့ မဖွဈသေးပါဘူး ငါ့အကောငျ့ထဲ အဖရှေိနရေငျ ငါလုပျခငျြသလို လုပျလို့ ရမှာ မဟုတျဘူးဆိုပွီး သူမသိအောငျ ဘလော့လိုကျတယျ။ကြှနျတော့အကောငျ့ကို ရှာမတှတေ့ော့ လာမေးတယျ။…… မငျးအကောငျ့ရှာမတှတေ့ော့ဘူး ဘယျရောကျသှားလဲတဲ့။ ကြှနျတျောလဲလိမျလိုကျတယျ….. သိဘူးလေ ပကျြသှားတာနမှောပေါ့လို့……။
အသကျကွီးတဲ့အဖကေ မသိရှာဘူး ..သွျော ဟုတျလားဆိုပွီး သူ့အကောငျ့ထဲကသတငျးတှပေဲ ဖွတျပီး ပြျောနရှောတယျ။မကွာခငျ သူ့ သားတျောမောငျကသူ့ကို ဘလော့ထားတယျဆိုတာ အိမျကညီမပွောတော့မှ အကောငျ့သဈကလေးဖှငျ့ပွီး add လို့မရတဲ့ သား အကောငျ့ ကို တိတျတိတျလေး follow လုပျထားရှာတယျ။ဒီလိုနဲ့ကြှနျတျော နိုငျငံခွားမှာ အလုပျသှားလုပျဖို့ အကွောငျးပျေါလို့ နိုငျငံခွားရောကျနခြေိနျ အဖမှေ့ာ ကငျဆာဖွဈလာတယျ။အဆကျအသှယျမရပဲ သားတျောမောငျ အဝေးရောကျနခြေိနျ။
အဖကေတော့ add လို့မရတဲ့ သားအကောငျ့က ပုံတှကေို ဆေးရုံမှာကွညျ့ရငျး အလှမျးဖွနေရေရှာတယျ။ပါးစပျကလဲ တဖှဖှ ငါ့သားလေး စိတျပူနမေယျ ငါ့ရောဂါအကွောငျး မပွောပါနဲ့တဲ့။သားတျောမောငျက ပငျလယျထဲမှာ သင်ျဘောသားဘဝ ဆိုတော့ ……ကမျးကပျတဲ့အခြိနျ အငျတာနကျသုံးလို့ရတော့ အိမျကလူတှနေဲ့ အဆကျအသှယျလုပျမှ သိရတယျ။အဖဆေုံးပွီတဲ့။မသခေငျ ကြှနျတော့ အကောငျ့မှာ တငျထား တဲ့ စာလေးတှေ ပုံလေးတှကေို ဖတျရငျး ပွုံးနရှောတာတဲ့။အဖေ့ အကောငျ့ လေး မီးစိမျးနပေါစေ။